FBSရဲ့ပရိုမိုးရှင်းမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီလား? ဇွန်လအတွက် ကံထူးရှင် ရွေးချယ်ပေးရတော့မယ့်အချိန်ရောက်လာပါပြီ! သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားသူများကို ပျော်ရွင်ကြည်နူးစေပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ပိုမို သာယာလှပသွားစေဖို့ အတွက် စိတ်ကူးအိပ်မက်များ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီ ပရိုမိုးရှင်းမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုက်ပါ.
• အင်ဒိုနီးရှားမှ Wildan Mochammad ကတော့ လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေပျော်ရွှင်သွားစေဖို့အတွက် အရုပ်လေးတွေလိုချင်ပါတယ်လို့ ဆန္ဒပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
• အင်ဒိုနီးရှားမှ Rosid ကတော့ သူမိသားစုကိုပိုမိုအလုပ်အကျွေးပြုနိုင်ဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဆန္ဒပြုခဲ့ပါတယ်။
• အင်ဒိုနီးရှားမှ Merlyn Rebecca S ကတော့ သူရဲ့ချစ်ရတဲ့မိခင်ကြီးအတွက် လျှပ်စစ်ဝှီးချဲ(ဘီးတပ်ကုလားထိုင်)တစ်ခု ဆန္ဒပြုခဲ့တာပါ။
သူတို့လိုကံထူးရှင်တွေထဲကမှ တစ်ယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်ချင်ပါသလား? လုပ်စရာရှိတဲ့ လွယ်ကူတဲ့အချက်လေးတွေကို ခပ်မြန်မြန်လေးလုပ်ဆောင်လိုက်ပါ - သင့်ရဲ့ရင်ထဲအသည်းထဲ အနက်ရှိုင်းဆုံးတနေရာမှာခိုအောင်းနေတဲ့ အတောင့်တဆုံး စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုဝေမျှလိုက်ပါ!
၁. FBS အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ: https://my.fbs.com.mm/registration
၂. သင်၏ FBSပရိုဖိုင်ကို Facebook သို့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ (အပြာရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ): https://fbs.com.mm/promo/dreams
၄. ယခုပို့စ်အောက်ရှိကွန်းမန့်တွင် သင်လိုချင်တဲ့လက်ဆောင်နဲ့ ဘာကြောင့်လိုချင်ရတယ်ဆိုတာကိုပါရေးခဲ့ပေးလိုက်ပါ!
အံ့သြဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်တွေ တကယ်ကြီးဖြစ်လာနေပါပြီ - သင့်ရဲ့ဘ၀ကိုလဲ အံ့သြပျော်ရွှင်စရာတွေဖြစ်လာအောင် လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ.